Amabali amathathu avela eFrance. Ukumelana nothando. | Uncwadi lwangoku
Amabali amathathu avela eFrance. Ukumelana nothando.
Ubusuku - Ukuthula kolwandle - Isuti yesiFrentshi
Kubalandeli benoveli yezembali ebekwe kwiMfazwe yesibini yeHlabathi, ngakumbi ixesha lokuthinjwa kweFrance ngumkhosi waseJamani, namhlanje sikhumbula ezi zihloko zintathu: Ubusuku, North American Kristin uHana, enye iinoveli ngempumelelo kakhulu kwaye wathengisa namhlanje; Ukuthula kolwandle, ukusuka kwiVercors; Y Isuti yesiFrentshingu-Irène Némirovsky. Ababini, ababhali baseFrance ababhala la mabali ngokuchanekileyo ngezo ntsuku zobumnyama. UNémirovsky waba nesiphelo esibuhlungu ngelo xesha.
Ngokunokwenzeka abona bafundi be-cinema banokubona iifayile ze- ukulungelelaniswa kwefilimu kwezi zimbini zidlulileyo, ngakumbi eyona yamva nje ye- Isuti yesiFrentshi. Kwaye ngokuqinisekileyo Ubusuku Akuthathi xesha lide ukwenza enye ngenxa yokuba nayo inokubakho. Makhe siyiqwalasele Amabali aqhelekileyo abelana ngawo malunga nomzabalazo weFrance Resistance, kodwa kananjalo malunga nokuphikisana okuninzi kwiimvakalelo eyenzekileyo phakathi kwabahlaseli nabahlaseli.
1 Ubusuku - uKristin Hannah
2 Ukuthula kolwandle - iVercors
3 Indawo yaseFrance - u-Irène Némirovsky
3.1 Kutheni uzifunda (okanye uzibone)
Ubusuku -Kristin uHana
Intle Ukunika imbeko kubafazi abaninzi abangaziwayo abalwa emfazweni ngokuchasene namaNazi ngezixhobo kuphela zethemba labo, isibindi, ukuzincama kunye nokuthula kodwa ukumelana nokubulala. Ibali loodade baseMauriac, elinabalinganiswa abangafaniyo kodwa amandla abo ahamba ngaphaya kweeyantlukwano zabo, ufuna ukubamela bonke.
Ngo-1939 eFrance UVianne uhlala kwidolophu encinci Ndikunye nomyeni wakhe uAntoine kunye nentombi yabo uSophia. Kodwa ngenye imini kufuneka agxothe umyeni wakhe, ohamba ngaphambili ngaphambi kwemfazwe. Akacingi ukuba amaJamani azokuhlasela iFrance, kodwa bayayenza kwaye kungekudala umphathi-Jamani uya kuthi afune indlu yakhe. Ukusukela ngoko kuya kufuneka bafunde ukuhlala notshaba okanye babeke emngciphekweni wokuphulukana nayo yonke into. Njengoko iminyaka idlula kwaye iya isiba mandundu, uVianne kuya kufuneka enze izigqibo ezinzima ngokuqhubekayo ukuze aqhubeke nokuphila.
Ngakolunye uhlangothi, udadewabo omncinci, u-Isabelle, ngumfazi oselula ovukelayo ofuna kwaye afumane unobangela wobomi bakhe ekulweni namaJamani. Ukudibana kwakhe noGaëton, umlweli weNkcaso, kuthatha isigqibo sokuba asebenze nabo eParis. A) Ewe, iya kunceda amahlakani awele kumhlaba waseFrance, ngakumbi abaqhubi beenqwelomoya, ukuba babuyele kumazwe abo. Ukwenza oku, uya kuba nakho ukulandela indlela yokuphuma enqumla umda neSpain.
Kubhaliwe ngamaxesha amabini: kumlandeli womntu wokuqala kunye nakwixesha elidlulileyo lomlandisi. Imvakalelo kwaye inika umdla, kulula, ukukhanya kunye neprosesa ekhawulezayo ekwaziyo ukukuhambisa nomdla ngeli yelenqe.
Ukuthula kolwandle - iVercors
Kwakunjalo ibhalwe ngo-1941 kwaye yapapashwa ngonyaka olandelayo ngokufihlakeleyo kwiParis ehleliyo ngamaNazi. Kwangoko yaba luphawu lokumelana namaJamani. Kubonakala ngathi IVercors yayisekwe kwisiganeko sokwenyani kuba wayengenise endlwini yakhe igosa laseJamani elinomlenze oqinileyo owayedlala intenetya ukuze achache. Abakhange babenabo ubudlelwane, nangona uVercors waqonda ukuba eli gosa liyayithanda iFrance kuba wayeneencwadi ezininzi zesiFrentshi.
Xelela indlela a Indoda endala kunye nomtshana wakhe omncinci, nabo abahlali bedolophu, bagqiba kwelokuba basebenzise loo nqaba ngokungavumi ukuthetha nomphathi waseJamani ohlala endlwini yabo.. Uyindoda yasemkhosini ngokwesiko kunye nomqambi womculo wangaphambili, kunye nentlonipho, imbeko kunye nokuqonda imeko. bucala ngasekhohlo izakuzama ukusondela kubo ngeemonologues malunga nethemba lobuzalwana kunye nokuncoma phakathi kwamazwe omabini. Kodwa ayizukuphumelela. Ekugqibeleni uyaphoxeka xa eqonda ukuba eyona njongo iphambili yabantu bakhe ayikokwakha kodwa kukutshabalalisa kwaye uyakuphela eshiya. Nangona kunjalo, akayi kushiya ukungakhathali indoda endala okanye ingakumbi umtshana wakhe, okrokrisayo ngemisebenzi yokuRhabaxa emngqongileyo kwaye kwangaxeshanye uziva enomdla kakhulu kumphathi.
Ubuhle bezinye iivesi abunakuphikwa. Njengale:
UWerner Von Ebrennac wajonga umtshana wam, iprofayile yakhe inyulu, inenkani kwaye inesithukuthezi, ethule kwaye egxininisa kakhulu apho, nangona kunjalo, intsalela yoncumo isadada. Umtshana wam wayenokukwazi ukuxela, ndambona ebrush kancinci, intambo eyenziwe phakathi kwamashiya akhe. Uqhubeke ngelizwi lakhe elincinci:
Kukho ibali endilifundileyo, olifundileyo: Ubuhle nerhamncwa. Ubuhle obuhlwempuzekileyo ... Irhamncwa linenceba yalo, alinamandla kwaye livalelwe, kwaye libeka kuzo zonke iiyure zosuku olungenakoyiswa nolunamandla. Ubuhle buyazingca, bunesidima ... buqinile. Kodwa irhamncwa lixabisa ngaphezulu kunokuba libonakala. Unentliziyo nomphefumlo onqwenela ukuvuka. Ukuba ubuhle befuna ...
Kukho Iinguqulelo ezimbini zefilimu yale noveli, enye ukusukela ngo-1949 enye ngo-2004. Kulungiselelwe abo bafuna ukubajonga.
Indawo yaseFrance - u-Irène Némirovsky
Akuthandabuzeki Esinye sezihloko ezidumileyo nezaziwayo zombhali wemvelaphi yaseRussia bafudukela eFrance owayenguNémirovsky. Okungakumbi ukusukela kwinguqulelo ephumeleleyo abayithatha bayisa kwi-cinema ngo-2014. Kodwa amabali omabini, inoveli kunye nombhali, nawo avela kwifilimu, nangona iyinyani ephawuleka ngokwenene.
Isuti yesiFrentshi es umsebenzi wakhe wobugcisa kuphela kuba ithuba liyivumele. Umbhalo wesandla ongagqitywanga wafunyanwa ngengozi ziintombi zakhe kwaye wapapashwa kwi2004., Phantse iminyaka engamashumi asixhenxe emva kokuba uNémirovsky, kunye nomyeni wakhe, bagxothwa kwaye babulawa eAuschwitz ngo-1942.
Ngeendlela ezithile zobomi njengoko zibonakalisa inxenye yokuziphatha koluntu lwe-bourgeois ngaloo minyaka, fYayikhulelwe yahlulwahlulwahlulwahlulwahlulweyo, kodwa ke uNémirovsky wabhala ezimbini kuphela: Isaqhwithi ngoJuni y Dolce, apho elinye ibali lokwamkelwa kunye nokuyeka emsebenzini kuqhubeka phantsi kweemeko. Kodwa ukungakhathali kwesiFrentshi kule meko kukwavelele, apho kukho ukugxekwa okungaphantsi. Nangona kunjalo, kwakhona siyabona ukuba, ngaphandle kwezi meko, zezona mvakalelo ziphambili okanye zehlabathi ezivelayo phakathi kwabalinganiswa. Kwakhona eyona nto inqabileyo inomtsalane kunye nomnqweno kunye nomzabalazo wokungabamkeli kodwa kwangaxeshanye uyabadinga.
Ukulungiswa kwefilimu ngo-2014 kwanconywa kakhulu.
Kutheni uzifunda (okanye uzibone)
Ngenxa yokumangalisa kokufana kwayo, imixholo yayo efanayo yeendlela ezahlukeneyo zethutyana, ukusukela ngoku ngokusondeleyo ukuya kwelona lidlulileyo.. Ababhali abohlukeneyo kunye neenkcazo ezifanayo, imizobo, ukubonakaliswa. Kwabelwana ngombono ongapheliyo: ukuqaqambisa into emanyanisa ngaphezu kwento eyahlulayo. Izilo ezingezizo izilo ezikhulu kwaye abantu abamsulwa bamsulwa. Kwaye ngaphezu kwako konke, iimvakalelo zendalo iphela kunye nokuphikisana okungapheliyo. Amabali afanayo, izivamvo ezifanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Amabali amathathu avela eFrance. Ukumelana nothando.
Bendingazi ukuthula kukaLwandle, makhe ndibone ukuba ndingakubamba na Inqaku elihle, enkosi kakhulu.
Umdlalo woncwadi: Zeziphi iincwadi ezihambelana nezi ziqwenga kunye nabalinganiswa?
Amabali ama-7 afundwayo ngexesha lohambo kwizithuthi zikawonkewonke